Inkwenkwana eneminyaka emibini ibulewe ngokumasikizi eKhayelitsha – Elitsha
5th April 2018 Phinda KulaCape Town, Iyavela 0 Xhosa
Umntana kaAndisiwe Fadana ubulewe ngokumasikizi ngelixa yena egcuma zintlungu esibhedlele. Umfanekiso siwunikwe.
Kunangoku abakayikholelwa abahlali bakoBM eKhayelitsha into yokubulawa ngokumasikizi kwenkwenkwana eneminyaka emibini ubudala kanye ngomhla wePasika. Ongumququzeleli kumbutho olwelwa amalungelo abantu ekuhlaleni, iSocial Justice Coalition, unkosikazi uNontando Mhlabeni uthi isiganeko sokubulawa komntwana ngokubethwa ngentonga yegalufa entloko sisiganeko esihlasimlisa umzimba ekwatyhola nokudlwengulwa konina womntwana uAndisiwe Fadana nongcuma zintlungu kwesinye sezibhedlele zikarhulumente eNtshona Koloni.
Ixhoba nelinamashumi amabini anesithathu eminyaka ubudala belihlala lodwa kwityotyombe. OkaMhlabeni uthi ukuhlala wedwa xa ungumama akuniki nabani na igunya lokuba enze into ayithandayo ngobomi bakho.
Uthi okokuqala wonke umntu ngokomgaqo siseko weli lizwe unelungelo lokuphila esitsho kananjalo ukuba akukho nabani na onelungelo lokuxhaphaza yaye athathe ubomi bomnye umntu. Lenkosikazi ithi umthetho kufuneka udlale indima enkulu ekubanjweni nasekutshutshisweni kwabo babandanyekayo. Woleke ngelithi umthetho mawuzame indlela onokuthi wenze ngayo umzekelo wokuba ahlonitshwe amalungelo abantwana namanina, uthi ubu ethe-ethe bamanina nabantwana abuniki nabani na ilungelo lokuba abenempatho gadalala kungenjalo abulale.
Omnye kubahlali ongavumanga ukudiza igama uthi umntwana ubethwe ngalentonga yegalufa ze wafakwa ilaphu emlonyeni. Ekwatyhola ngelithi lo wenze elisikizi ebencuma nonina wexhoba kuba bebe kunye ngobusuku obandulela iPasika ngethuba beqhuba amatakane besuka kumzi wentselo.
Ukanti ziwephantsi iinzame zethu ukuzama ukufumana ingxelo kwabakwantsasana nekukholeleka ukuba kuqhutywa uphando malunga nesisiganeko.
Also read: Abahlali baseKhayelitsha bafuna indlela zokuphelisa ulwaphulo-mthetho
Impatho gadalala yabantwana
Imphatho gadalala yamanina nabantwana